Rastrabani.com | कोभिड-१९ का कारण गरिबी बढ्न लागिसक्यो - Rastrabani.com कोभिड-१९ का कारण गरिबी बढ्न लागिसक्यो - Rastrabani.com
डा शंकर शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
स्वाभाविक रूपमा हो। यसले प्रत्यक्ष रूपमा ३० लाख मान्छेलाई आघात पारेको छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब घटेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्या बेरोजगार भएका छन्। किन्न सक्ने क्षमता भएकाले पनि किनेका छैनन्।
चैतदेखिको लकडाउनले बाहिर ननिस्किँदा व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। यसले रोजगारी गर्नेमात्र नभएर व्यापार, उद्योग चलाउनको पनि आम्दानी घटेको छ।
उदाहरणका रूपमा शैक्षिक संस्था ठप्प हुँदा दुई लाख शिक्षकले काम पाएका छैनन्। उनीहरूले तलब नपाएपछि कहाँबाट खर्च गर्ने ? कम आम्दानी भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि कम गर्छन्। बिक्री नभएपछि उत्पादन हुने कुरा भएन। माग कम भयो।
त्यसो भए यसले गरिबी बढाउँछ  ?
ईतिहाइ नेपाली कृषिमा भने पनि उनीहरूले कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएका छन्। अहिले पनि अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। हामीले आफ्नो उत्पादन मात्र हेर्ने होइन। कृषि बाहेक ठूलो संख्यामा सहरी क्षेत्रमा काम गर्छन्। कृषि क्षेत्र रोजगार, व्यापार, व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ।
विशेष गरी कृषिमा कम प्रभाव परेको भने पछि उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। यसपालि वर्षा भएपछि किसानले मल पाउन सकेनन्। त्यसले उत्पादनमा असर पार्छ। यी विविध कारणले खाद्य असुरक्षा पनि बढेको देखिन्छ।